Nke a bụ chaja chaja ọhụrụ Tesla maka smartphones | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ chaja chaja ọhụrụ Tesla maka smartphones
Teslọ ọrụ Tesla, nke Elon Musk bụ nke kachasị mkpa, na mgbe ụfọdụ esemokwu, na-arara onwe ya nye n'afọ ndị na-adịbeghị anya iji gbalịa gbasawanye ngwa ahia gi n’ahịa, karịrị ụgbọala eletriki na batrị nchekwa nchekwa ụlọ.
Ngwaahịa kachasị ọhụrụ ị malitere n'ahịa, ma eleghị anya ga-enwe nnukwu mmasi n'etiti ndị na-eso ụlọ ọrụN'agbanyeghị arụmọrụ ya adịghị mma, anyị na-ahụ ya na chaja ikuku maka smartphones, chaja nke dị naanị na oji na ọcha na atụmatụ nke na-adịghị adọta mmasị pụrụ iche.
N'ịbụ chaja ikuku, n'ụzọ ezi uche dị na ya nwere asambodo Qi, yabụ dakọtara na ekwentị niile na ahịa na teknụzụ a, teknụzụ nke dabara nke ọma na-agbasawanye ebe niile. Ọ bụrụ na ekwentị anyị enweghị ụdị ụgwọ a, anyị nwere ike iji ọdụ ụgbọ USB-C ma ọ bụ jiri eriri USB anyị na-emebu iji jikọọ ya na ọdụ USB-A nke ọ na-enyekwa anyị.
Ike batrị bụ 6.000 mAh, yabụ dabere na ike batrị karịrị otu ụgwọ na nke kachasị mma. Nchaji ikike bụ 5W, a odori ọsọ na-oke ngwa ngwa mgbe tụnyere ndị ọzọ chaja mara ụdị dị n'ahịa, yabụ anyị ga-enwerịrị ndidi iji zie ngwaọrụ anyị.
Dị ka anyị nwere ike ịgụ na nkọwa nke isiokwu ahụ, a na-arụzi chaja wireless chaja maka 6000 mAh (22.2Wh) smartphones na otu sel ahụ nke batrị nke ụlọ ọrụ ahụ na-arụ, maka ụlọ na maka ụgbọ ala eletrik ya. Pricegwọ a isi wireless wireless odori isi bụ $ 65, obere oke ọnụ maka uru ọ na-enye anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Nke a bụ chaja chaja ọhụrụ Tesla maka smartphones